Nzira yekuti unyore isu pa WhatsApp yedu? Ita urongwa HGH uye uwane 2% kuora mwoyo
Nzira yekuti unyore isu pa WhatsApp yedu? Ita urongwa HGH uye uwane 2% kutora
Ndapota faira WhatsApp kana iwe usina kuita zvakadaro kubva panzvimbo yepamutemo. kana iwe usina kuzviita zvakadaro
WhatsApp nokukurumidza uye nyore nyore kuziva kuti ndeupi wevanoshamwaridzana vari kushandisa WhatsApp nekuwana bhuku rekero refoni yako.
Nzira yekutanga kushandisa bhuku rekero refoni nhamba
Chengetedza zita rekubatana uye nhamba yefoni mubhuku rekero refoni yako.
Chengetedza nhamba yacho yakazara international format + 66 94 635 76 37 se "HGH Thailand"
Vhura WhatsApp uye enda kune Chats Tab.
Tora iyo new chat kuvake > fefeta.
Tsvaga "HGH Thailand in new chat uye tanga kukurukura nesu!
Nzira inotevera inotevera iri nyore - nekudhonza pahutano
Dzvanya pakushamwaridzana kubva pafoni yako (kana iwe waisa WhatsApp, firiji ichazarura pakarepo.
Inotevera nzira kuburikidza neQR code